Guraandhala 13, 2014
Obbo Baqqalaa Nadhii Goota Oromoo Uumrii gutu Oromoof falmatee goota Oromooti. Obbo Baqqalaa Nadhii Wara Maca fi Tullama hundasan keessa tokko yamuu ta’uu hanga guyya du’aa isaati Macaa fi Tulllama oogana ta’ee hojeeta ture. Obbo Baqqalaa Nadhii Oromoo hidhamee hunda gargarun beekama ture. Macaa fi Tullamaf falmachuuf yeero heedu qabame hidhama ture, Dhaloota hida ogganoota Finfinnee siirna Menellik falmatan irra kan dhufee fi uumuri isaa gutuu Haile Silasee, Dargi fi Wayyane guyya hunda utuu falmatu ture. Gummin Paarlamaa Oromoo maatii, hiriyoota isaa, jaaloota isaa fi miseensoota Macaa fi Tullamaa hundaf jajabina isaanti dhamana.
Maatii fi firoottan gooticha OROMOO Obboo Baqqalaa Nadhiif jajjabina, Ekeraa issaaniif qabbana hawwaa nagaa itti dhamacha yeero hunda nama Oromoo yadatu' ta'uu isaan ibsa,